रिपोर्टर: डा. उत्तम गौली बाट सम्पूर्ण खबर
क्वारेन्टाइनको विकल्प छैन!
कोरोना भाइरस मान्छेबाटै मान्छेमा सर्छ। शुरुमा सार्स-कोभ -२ नाम दिइएको यो कोरोनाभाइरसले कोभिड-१९ नामक रोगको महामारीको निम्त्याएको छ। यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को सम्पर्कमा सीधै प्रसारण हुने मात्र नभई संक्रमित व्यक्तिले छोएको सामग्रीहरू वा सतहहरु छोएर पनि सर्ने र कुनै लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरुबाट पनि सर्ने हुन
हामी कोरोना भाइरसलाई जित्नेछौं !
तपाईं यो लेख पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। आजको मानवको सबैभन्दा बलियो शक्ति भनेको सूचना हो। त्यसमा विश्वास गरेर दृढ ईच्छाशक्ति बनायौ भने हामी त्यसैको बलमा बॉंच्नेछौं। तथ्याङ्क, विज्ञान, र सूचनाको अभावमा सदियौंदेखि मान्छे देवी-
उग्र–राष्ट्रवादको खहरेले श्रीलंकाको एमसीसी बगायो, नेपालको बचाउन सकिएला?
श्रीलंका सरकारले संसदीय स्वीकृति बिना अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ। श्रीलंकामा याे हुनसक्छ भन्ने अपेंक्षा पहिले नै गरिएकाे थियो। तर उनीहरुको हकमा अझै सम्झाैता गर्ने समय बाँकी रहेको हुँदा पुनर्विचार गरि एमसीसीको सहयोग लिन सक्ने सम्भावना छदैँछ। सरकारले पनि यसमा प
हालै कुराकानीका क्रममा एउटा भाइले मलाई भन्याे–‘अमेरिका जहॉं पस्छ, त्यहाँ रगत र बिष पुग्छ।’ अचम्म मान्दै मैले सोधें– कसरी? उसले मलाई सिरियामा एउटा बमले क्षतिग्रस्त बनेकाे घरको पृष्ठभूमिम
मैले एमसीसीसम्बन्धी छलफल ग्रुप सञ्चालन गरेपछि धेरै मान्छेसँग यस विषयमा कुरा गरेको छु। मेरो अभियान एमसीसी पास गराउनेतर्फ भन्दा पनि जनस्तरमा रहेको समझदारीलाई हानी हुनबाट रोक्ने हो। त्यसकारण ठूला नेताले यसमा रुची लिइरहनुभए पनि जनतालाई सुसूचित गर्ने र भ्रम चिर्ने काममा मेरो प्रयास केन्द्रीत छ।